Lalana Tsarasaotra – Ivato : Hisokatra ny volana novambra izao -
AccueilSongandinaLalana Tsarasaotra – Ivato : Hisokatra ny volana novambra izao
Ho afaka ny adin-tsain’ireo mpampiasa lalana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana mihazo an’Ivato. Araka ny fampitam-vaovao teo anivon’ny minisiteran’ny Asa Vaventy (MTP), hisokatra ary ho vita sy hifarana amin’ny voalohan’ny volana novambra izao ny lalam-baovao mampitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato.
Tsiahivina fa ny volana febroary 2016 no nanombohana ny asa amin’ny fanamboarana ny lalana Tsarasaotra -Ivato. Tamin’ny fandraisan’i Madagasikara ny Fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, ny volana novambra 2016, ihany no afaka sy azo nampiasaina iny lalana iny dia nakatona indray noho ny tsy fahatomombanana, ka mety hampitera-doza ny mpampiasa lalana. Nandray ny fanamboarana indray ny orinasa sinoa HEC, nanomboka ny volana jona lasa teo ary raha ny vinavina dia hisokatra manomboka ny voalohan’ny volana novambra izao ity lalam-baovao ity.
Raha ny fanazavana teo anivon’ny minisitera tompon’andraikitra, manodidina ny kilometatra vitsivitsy sisa no tsy vita sy tanteraka ny asa amin’ny fanamboarana sy fandrakofana tara iny lalana iny. Voalaza fa mirefy 11 km ny lalana Tsarasaotra – Ivato. Noho izany indrindra, efa mamaramparana ny asa ny orinasa tompon’antoka amin’ny fanarena sy fanamboarana izany amin’izao fotoana izao. Tsiahivina fa nasiam-panamboarana ary nohitarina ihany koa ny « rond point » tetsy Tsarasaotra mba hanamorana ny fifamoivoizana amin’iny fihaonan-dalana iny. Voalaza fa mba hisorohana ny loza mety hitranga amin’io fihaonan-dalana eo Tsarasaotra io no antony nanamafisana sy nanitarana izany. Manaraka izany, mba hanamorana ny fifamoivoizana eo amin’ny sampanan-dalana ihany koa.